Umhambisi wamanzi → Inkonzo yezempilo. Isibhedlele • IOfisi
Ngaba uyayifuna into yokuhambisa amanzi esibhedlele, iofisi kagqirha, ikliniki yezempilo? Inkampani yaseWater Point ibonelela izihluzi zamanzi ezingenabhotile, baseliUmthombo weenkokheli zehlabathi kumzi mveliso, apho sisasaza yedwa ePoland.
Izibhedlele, iiklinikhi zonyango kunye nee sanatorium ziindawo apho abantu bafuna ukhathalelo olukhethekileyo kunye nokhathalelo lokuhlala kwabo. Ngamanye amaxesha ixesha lokulinda le nkqubo lide. Kukwakhona iimeko xa izigulana kufuneka zihlale kwindawo yokugcina impilo kangangeentsuku, iiveki okanye iinyanga.
Ihlala isenzeka into yokuba ukutya okongeziweyo neziselo zabaguli okanye amabanjwa kubonelelwe lusapho olusondeleyo okanye nabahlobo. Nangona kunjalo, oku akwanele. Udinga ukufikelela rhoqo kukutya okutsha, okunencasa kunye nokunempilo amanzi, ifumaneka simahla kuye nabani na undwendwela isibhedlele okanye iziko lezempilo, kunye nazo zonke iindwendwe kunye nabasebenzi.
Sicebisa ngokukodwa kwaba bantu okusela amanzi okusela yenzelwe izibhedlele kunye namaziko onyango apho amanzi kufuneka afezekise imigangatho engqongqo kakhulu. Izinto zokuhambisa amanzi ezibhedlele sisisombululo esifanelekileyo esinokubonelela abaguli, iindwendwe kunye nabasebenzi malunga nokusela okusemgangathweni kwamanzi okusela kunye nokunambitheka okukhulu.
Ndiyabulela kwizisombululo zobungcali, abahambisa amanzi okusela bangaqinisekisa ucoceko kunye nokukhuseleka kokusetyenziswa.
Amanzi asimahla, asempilweni ayonyusa umgangatho weenkonzo zonyango, kwaye iindleko zokusebenzisa isixhobo esinjalo zincinci ngokwenene.
Abahambisa amanzi okusela, imithombo kunye nemithombo ibonelela ngamanzi acocekileyo kwaye amatsha ahlangabezana neemfuno ezingqongqo zococeko kunye nezifo.
Ukongeza, ezi zixhobo zinobunkunkqele kwaye ziyile mihla, kwaye ukusetyenziswa kwazo akuyongxaki nkqu kubantwana nakwabakhulileyo.
Izixhobo zokuhambisa amanzi okusela zinokubekwa kwiipaseji, kumagumbi okulinda nakwiindawo eziqhelekileyo. Ziyilelwe ukuba ziqinisekise ukuthuthuzelwa kokusetyenziswa kwaye kwangaxeshanye zingadaleli ingozi yentsholongwane. Zinokusetyenziswa kwiiofisi naseziofisini.
Amanzi okusela acocekileyo kwaye amnandi asisiqinisekiso sempilo yethu kwaye ngakumbi abantu abagulayo okanye ababuthathaka, kunye nabasebenzi nabantu ababandakanyekayo kunonophelo lwabantu abagulayo kufuneka bafumane lula.
Abaseli bamanzi okusela benziwe ngezinto ezisemgangathweni ophezulu, eziqinisekisa imeko yobuchwephesha kunye nokubonakala kwesixhobo ixesha elide. Uyilo lwangoku lungena nakweyiphi na indawo kawonke-wonke kwaye nasezibhedlele, amaziko ezempilo kunye neendawo zokugcina izigulana aziyi kuba sisisombululo esisebenzayo kuphela, kodwa nomhombiso wendawo ethile.
Abasasazi banenkqubo ephucukileyo yokukhusela ngokuvuza kwamanzi okungalawulekiyo kunye nezikhuselo ezifanelekileyo.
Izixhobo zokuhambisa amanzi okusela ezibekwe ezibhedlele zonga ixesha nendawo kwaye zinempembelelo entle kwindalo.
Ezi zixhobo zanamhlanje zibonelela ngamanzi acocekileyo ekhristale ngexesha elijikelezayo kubo bonke abantu abahlala esibhedlele, ekliniki okanye kwisalatorium.
Ikwayisisombululo se-endalo kunye noqoqosho, kuba akufuneki ukhathazeke ngokuhambisa isixa esikhulu seebhotile zamanzi, uzigcine uze uphinde uphinde usebenzise inkunkuma kwakhona.
5 / 5 ( 14 iivoti )
umatshini wokuthengisa amanziamanzi asimahla ezibhedleleisitshisi samanziisitshisi samanziisitshisi samanziisitshabalalisi samanzi esitshiweyointo yokuhambisa amanzi esibhedleleixabiso lokuhambisa amanziisaphulelo sokuhambisa amanziohambisa amanziUkusela umthombo wamanzi esibhedlelagassing yamanziifriji ene-dispenser yamanziumatshini wokuhambisa amanziabaseli esibhedleleisixhobo sokuhambisa amanziisixhobo samanzi ekhabhoniamanzi okhathalelo lwempiloamanzi asempilweniamanzi ezibhedleleamanzi aqabukayo aphuma empompiniamanzi kwiofisi kagqirhaamanzi kwiklinikhi yezempiloamanzi entwasahlobo
Bona ezinye iindidi: